Shopper ကုန်ပစ္စည်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည် AdWords ကုန်သည်များအပေါ်မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသည်။ | Martech Zone
စျေးဝယ်သူများအားဝယ်ယူမှုဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များကိုပိုမိုသိရှိရန်ဂူဂဲလ်သည်ဇူလိုင်လနှောင်းပိုင်းက AdWords feature ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ Google.com နှင့်ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းကြော်ငြာများ (PLA) Google ကစျေးဝယ် ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်ဂူဂဲလ်စျေးဝယ်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ
Amazon ကိုစဉ်းစားပါ။ Google မှာကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်ရှာဖွေသောအခါမြင်ရလိမ့်မည်။ ထုတ်ကုန်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည်ပြန်လည်သုံးသပ်သည့်အရေအတွက်ဖြင့်ကြယ်ငါးပွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်စနစ်ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။
မင်းကော်ဖီထုတ်လုပ်သူအသစ်အတွက်စျေးကွက်ထဲရောက်နေပြီဆိုပါစို့။ သင်ထုတ်ကုန်ကို Google ရှာဖွေသောအခါရလဒ်များသည်သင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်သည့်အရေအတွက်နှင့်အတူရရှိနိုင်သောထုတ်ကုန်များစာရင်းကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။ ယခု Google ကြော်ငြာအသစ်ကိုယူနိုက်တက်စတိတ်ရှိစျေးဝယ်သူများအတွက်ရရှိနိုင်သည်။
စျေးဝယ်သူများအတွက်အကျိုးကျေးဇူးမှာအလွန်ထင်ရှားသည်။ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသီးခြားခွဲထုတ်ထားသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များဖြင့်ဝယ်ယူမှုဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များသည်ပိုမိုသိရှိပြီးပိုမိုလျှင်မြန်နိုင်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုသည်အခြားစားသုံးသူများနှင့်မည်သို့သက်ဆိုင်သည်ကိုတိုင်းတာရန်စျေးဝယ်သူများသည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအားလုံးကိုမပြုလုပ်သင့်ပါ။
စျေး ၀ ယ်သူများကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီသည့်အရေးပါသောအချက်အလက်များသည်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်အခြားရှာဖွေမှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကုန်ပစ္စည်းပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းသည်ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းကြော်ငြာများတွင်ပါသော AdWords feature အသစ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
စျေးဝယ်သူများအတွက် AdWords ၏လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်သည်ကုန်ပစ္စည်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည်ကုန်သည်များအတွက်နည်းလမ်းများစွာဖြင့်အသုံးဝင်သည်ဟုယုံကြည်ရသည်။ ဂူးဂဲလ်ရှာဖွေမှုများ၌ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူကုန်ပစ္စည်းစာရင်းကြော်ငြာများသည်ကုန်သည်များအတွက်ပိုမိုအရည်အချင်းပြည့်မီသောအသွားအလာကိုဖန်တီးပေးနိုင်သည်။ beta ကိုကန ဦး စမ်းသပ်မှုများကကုန်ပစ္စည်းစာရင်းကြော်ငြာများတွင် click-through-rate နှုန်း ၁၀% တိုးလာသည်ကိုလည်းပြသသည်။
နောက်ထပ်ဥပမာပြရအောင်၊ ငါတို့ကော်ဖီထုတ်လုပ်တဲ့ဥပမာကိုပြန်သွားကြရအောင်။ Google.com သို့မဟုတ် Google Shopping ရှိအရာများကိုရှာဖွေတဲ့အခါစျေးဝယ်သူများကမြင်တွေ့ရသောစျေးဝယ်ရလဒ်စာရင်းဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းတစ်ခုတွင်အသုံးပြုသူပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက် ၂၃၀ ပါသည့်ကြယ်လေးပွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းရှိနိုင်သည်။ သုံးသပ်ချက် ၃,၄၂၇ နှင့် ၄.၅ ကြယ်ပွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိသည့်အခြားတစ်ခု။ ဂူဂဲလ်သည်ထိုအရာများကိုထပ်မံခွဲခြားထားသည် လူကြိုက်အများဆုံး နှင့် လူတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစား.
စျေးဝယ်သူများသည်သတ်မှတ်ချက်များကိုနှိပ်သောအခါ၎င်းတို့သည်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များရှိသော ၀ င်းဒိုးအသစ်သို့ပြန်သွားသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များတွင်ဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှု၊ တောင်းဆိုမှုကိုင်တွယ်မှု၊ အထူးလျှော့စျေး၊ ကုန်ကျစရိတ်၊ ၀ ယ်မှုလွယ်ကူခြင်း၊ ဤ ၀ င်းဒိုးတွင်ကုန်သည်၏ပင်မစာမျက်နှာမှတစ်ဆင့်ကလစ် နှိပ်၍ အခွင့်အလမ်းတိုးလာသည့် link တစ်ခုလည်းပါ ၀ င်သည်။
အတိုချုပ်ပြောရလျှင် AdWords ကုန်ပစ္စည်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည်ကုန်သည်များအား CTR ရာခိုင်နှုန်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်အမြတ်အစွန်းတိုးမြှင့်ပေးသော်လည်းပြိုင်ဆိုင်မှုမှထွက်ခွာရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုပေးသည်။
ဒေတာကို Gets ဘယ်မှာ
စျေးဝယ်သူများကိုကူညီရန်ဂူဂဲလ်စျေးဝယ်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါကသင်၏ကုန်ပစ္စည်း၏ထိတွေ့မှုနှင့် CTR သည် ပို၍ ကောင်းသည်။ သို့သော်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည်မည်မျှတရားဝင်သနည်း။ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များအတွက်အချက်အလက်များသည်မည်သည့်နေရာမှလာသနည်း။
Google ကအလိုအရထုတ်ကုန်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည်အရင်းအမြစ်မျိုးစုံမှအဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်သည့်အချက်အလက်များကိုစုစည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည်ကုန်သည်များ၊ သုံးစွဲသူများ၊ တတိယပါတီစုစည်းသူများနှင့်အယ်ဒီတာ့ဘ်ဆိုက်များမှစုစည်းပြီးဖော်ပြချက်၏စုစုပေါင်းကိုယ်စားပြုမှုကိုပြသနိုင်သည်။
တနည်းအားဖြင့်ဒေတာသည်အဓိကအားဖြင့်ဖြစ်သည် Google ကစားသုံးသူစစ်တမ်းများ စားသုံးသူတုံ့ပြန်ချက်ကိုရရှိရန်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင်ဖော်ပြထားသောနောက်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်များသည်များသောအားဖြင့်စစ်တမ်း ၁၀၀၀ ကျော်ပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုအပြောင်းအလဲများအပေါ်ယေဘူယျထင်မြင်ချက်အနေဖြင့်မွမ်းမံမှုများကိုလည်းအစဉ်တစိုက်အကောင်အထည်ဖော်သည်။
ကုန်ပစ္စည်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက် Feature ကိုမည်သူသုံးနိုင်သည်
ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းကြော်ငြာများသည်အမေရိကန်စျေးဝယ်သူများအားပစ်မှတ်ထားသောကုန်သည်များနှင့်ကြော်ငြာသူများအတွက်သာအသုံးဝင်သည်။ ဤအင်္ဂါရပ်ကိုဖွင့်ရန်ကုန်သည်များသည်သူတို့၏ကုန်ပစ္စည်းပြန်လည်သုံးသပ်မှုအချက်အလက်အားလုံးကိုဂူဂဲလ်နှင့်ဖြစ်စေ၊ တတိယပါတီစုစည်းသူမှတစ်ဆင့်ဖြစ်စေမျှဝေရန်ရွေးချယ်ရမည် အတည်ပြုထားသောတတိယပါတီရင်းမြစ်များပါဝင်သည် စျေး, Ekomi, Feefo, နေပြည်တော်, Reevoo, ပြန်လာပြီ, တကယ, ဟုတ်ပြီ, ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များ, Viewpoint, Yotpo.
ကုန်သည်များသည်အရည်အချင်းပြည့်မီရန်အနည်းဆုံးသုံးသပ်ချက်သုံးခုရှိရမည်။ ဇူလိုင်လနှောင်းပိုင်းမှအောက်တိုဘာလအထိပြန်လည်သုံးသပ်သည့်အကြောင်းအရာများကိုဝေမျှမည်၊ မလုပ်မည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဂူးဂဲလ်သည်ကုန်သည်များအားအချိန်များစွာပေးသည်။ ဤကာလအတွင်းကုန်ပစ္စည်းစာရင်းကြော်ငြာအားလုံးတွင်ပြန်လည်သုံးသပ်သည့်အချက်အလက်ရှိသူများအတွက်ထုတ်ကုန်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။ နို ၀ င်ဘာလာပါမည်၊ ကုန်သည်သည်သူတို့၏သက်ဆိုင်ရာကုန်ပစ္စည်းများအတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များကိုမျှဝေရန်ရွေးချယ်မှသာကုန်ပစ္စည်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုပြလိမ့်မည်။
ဂူဂဲလ်ထုတ်ကုန်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို Enable လုပ်နည်း
အကယ်၍ ဂူးဂဲလ်သည်သင်၏ထုတ်ကုန်များအတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်လုံလောက်သောအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းခဲ့ပါကအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည်သင်၏စာရင်းတွင်အလိုအလျောက်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ သငျသညျသေချာအောင်ချင်တယ်ဆိုရင်, သို့သော်, အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကျေးဇူးတော်ကာလပြီးနောက်ရှိသေးပါလိမ့်မယ်, အဖြစ်ကောင်းစွာထုတ်ကုန် ratings ပုံစံဖြည့်စွက်လိမ့်မည်။
သင်၏စီးပွားရေးသည် PLAs ကိုအသုံးပြုပါက၎င်းသည်အားသာချက်ယူရန်အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏စာရင်းနှင့်တွဲဖက်ထားသောကောင်းသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည်စျေးဝယ်သူများအားသူတို့၏ ၀ ယ်ယူမှုဆုံးဖြတ်ချက်များကိုဆွဲဆောင်ရန်နှင့်ကူညီရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မကောင်းသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည်တစ်ဖက်တွင်သင်၏ထုတ်ကုန်များနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုနည်းသွားနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပြောင်းလဲပစ်ကြောင်းသတိရပါ။ အမြဲတမ်းထိပ်ဆုံးမှနေရန်၊ စီးပွားရေးလုပ်ရန်အကောင်းဆုံးဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အကောင်းဆုံးကုန်ပစ္စည်းများကိုသာကမ်းလှမ်းခြင်းထက်ပိုကောင်းသောလမ်းမရှိပါ။ ကြယ်ငါးပွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုအချိန်တိုင်းတွင်ရည်ရွယ်ထားပြီးသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်တစ်ခုတည်းသော ဦး တည်ချက်သည်တိုးတက်သည်။
Tags: AdWordsကုန်သည်တွေadwords ထုတ်ကုန်စာရင်းဈေးEkomiFeefoAdWords အ googleဂူဂဲလ်ထုတ်ကုန်စာရင်းgoogle ထုတ်ကုန်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များgoogle စျေးဝယ်နေပြည်တော်ထုတ်ကုန်စာရင်းထုတ်ကုန်ကြော်ငြာကြော်ငြာထုတ်ကုန်စာရင်းထုတ်ကုန်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များReevooပြန်လာပြီတကယဟုတ်ပြီပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များViewpointYotpo
စီအီးအိုနှင့်တည်ထောင်သူအဖြစ် Creativ ဒစ်ဂျစ်တယ်Scott သည်သူ၏စီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်စိတ်ဓာတ်၊ တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်အရာအားလုံးအတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုကိုအသုံးပြုပြီးသူ၏စီးပွားရေးကိုချောမွေ့သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ်တိုးချဲ့ရန်။
သင်၏စီးပွားရေးအကြောင်း rap လုပ်ရန်အချိန်ကောင်း (သတ္တုတွင်းကိုလက်မလွတ်ပါ)